Zimbabwe Yoramba Ichitemesa SADC Musoro
Nyamavhuvhu 17, 2010
Musangano wemukuru wepagore wevatungamiri venyika dziri muSADC wapera manheru eChipiri muWindhoek kuNamibia. Sangano iri range richitarisirwa kubuda nezvisungo zvaro kusanganisirawo panyaya yeZimbabwe.
Nyaya yeZimbabwe yange iri mudariro vatungamiri vemuSADC vachikurukura kusafamba zvakanaka kuri kuita hurumende yemubatanidzwa. SADC yazeyawo nyaya yeZimbabwe yekuramba kutambira zvisungo zvedare reSADC Tribunal panyaya yekutorwa kweminda kubva kuvachena.
Asi pari kubuda mashoko akasiyana zvikuru kubva kumusangano uyu zvikuru pane zvakabuda kumusangano weSADC Troika neSvondo. VeMDC vari kuti SADC Troika yakatenenderana kuti misariridzwa yezviri kunetsa muhurumende, ipedzwe mukati memwedzi uye kuti paumbwe hwaro hwesarudzo.
Zviri kunetsa pakati pemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, inyaya yemaitiro aVaMugabe avo vari kuramba kugovana masimba naVaTsvangirai.
VaMugabe vakadza gavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe nemuchuchisi mukuru wenyika, VaJohannes Tomana, vasina kuwirirana nevamwe vavo muhurumende sezvinodiwa nechibvumirano chavakanyorerana pasi musi wa 15 Gunyana 2008.
Vaviri ava vari kunetsana zvakare pamusoro pekusagadzwa kwemagavhuna eMDC mumatunhu akakunda bato iri.
Chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti nyaya idzi hadzina kukurukurwa nezvadzo kumusangano weSADC.
Vati gungano iri riri kufara nebasa raVaZuma uye kuti vatungamiri vaenderera mberi vachitaurirana pasina nguva yatarwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaTrevor Maisiri, vanoti SADC haina meno nekudaro hapana chaingaite muZimbabwe.